Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Bilaogin’ny Fialantsasatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Pakistana: Bilaogin'ny Fialantsasatra
Voadika ny 01 Desambra 2018 19:17 GMT 1	 · Mpanoratra Omer Alvie Nandika miora
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Saripika, Teknolojia, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Tafaverina aho! …sa tsy nisy nahatsikaritra ny fahalasàko? Na izany na tsy izany, koa satria tsy afaka nanatrika ny fihaonamben'ny Global Voices tany Delhi ny tenako (satria mbola miandry ny fanekena ny visako avy any India efa telo volana izao), nampionon-tena tamin'ny fitsidihana ny tanindrazako, Fanjakan'i Lesotho, aho. Tsia, mihanihany fotsiny aho, lasa nandeha vakansy mendrika aho (raha afaka nanao izany ny tenako, satria tsy hisy hafa hanao izany) tao Pakistana. Sarobidy tokoa ny androko tany, nitety ireo fitaovana rehetra afaka natolotr'ireo tanànan'i Lahore sy i Karachi. Afaka nihaona tamin'ireo bilaogera Pakistaney maro mihitsy aza, ny lahatsoratr'izy ireo izay fitsidiko sy azavaiko anatin'ny lahatsoratro ato amin'ny GV. Kanefa alohan'ny hahatongavako amin'izay, mamelà ahy hisarika ny sainao amin'ity lahatsoratra farany nosoratan'i Teeth Maestro ity, izay niara-namorona ny hetsipanentanana Aza Sakanana ny Bilaogy  (rohy maty). Anatin'io no anomezany ny antsipirian'ny vahaolana vaovao hialàna amin'ny fandraràna ny blogspot iray manontolo  mbola manan-kery ao Pakistana.
Manana olana amin'ny fitsidihana ireo vohikala blogspot miaraka amin'ny pkblogs aho ka nanapa-kevitra ny hiezaka hitady vahaolana hafa, nirenireny nitady vahaolana tsara aho ary taorian'ny fihazàna henjana dia nahita hevitra, mametraka zohy SSH azo antoka ampiarahana amin'ny “Plug-in” FoxyProxy an'ny FireFox.
Nandritra ity fialàna sasatra ity, afaka nitsidika ny sasany tamin'ireo toerana tiako indrindra tao Lahore aho, anatin'izany ny Tranombakok'i Lahore. Raha manana fahafahana mitsidika an'i Lahore ianao indray andro any, tsy maintsy jerenao ity toerana ity raha tsy izany tsy avelan'ireo manampahefana hiala ny tanànana ianao (tokony izany no pôlitika amin'ireo mpizahatany rehetra tonga mitsidika, raha nisy nidirako tao). Ny ampahany tsara indrindra dia amin'ny sarany 10 Ropia monja, avelany maka sary anatin'ny tranombakoka ianao. Nitsinjatsinjaka aho, ary nakateo amin'ny sary 150 teo. Hanokatra ny Tahirin-tsariko manokana any aminà tranombakoka aho izay handranty ny sarin'ireo fampirantiana tao amin'ny tranombakok'i Lahore, ary hampandoa 5 Ropia monja ho an'ireo haka sary ny sariko.
Manamarika fanontaniana saro-baliana iray hafa indray  i Glasshouse anatin'ny lahatsorany farany.
Tanatin'ny taona maro nifanesy, nanana fahafahana niresaka taminà mpitantsoratra vahiny maro taloha sy ambasadaoro zokiny aho ary nandritra ireo tafatafa ireo (ny sasany lava, ny sasany fohy) niezaka foana aho ny nanontany zavatra iray tsotra tamin-dry zareo tsirairay avy: Iza no nanao didy jadona ny politikan'ny raharaham-bahiny tao Pakistana tanatin'ireo folo taona vitsy lasa?
Lapan'i Mohatta – Karachi
Tranombakoka iray hafa mendrika ny hotsidihina ihany koa ny Lapan'i Mohatta ao Karachi. Trano fonenan'i Fatima Jinnah taloha, ilay anabavin'i M. A. Jinnah izay nanangana an'i Pakistana, io tranobe io ary naverina namboarina tanatin'ny hatsarany tanteraka ka mampiantrano tranombakoka ankehitriny, voatokana hitahirizana ny tantaran'i Sindh. Tsy azo akàna sary anatin'ilay tranombakoka, indrisy, mety ho nanokatra Tahirin-tsary iray hafa aho mampiseho ireo sarin'ny fampirantiana tsara rehetra tao.
Fihaonan'ny Bilaogera tao Karachi
Nandritra ny fijanonako tao Karachi, voaasa taminà fihaonana maro an'ireo bilaogera tao aho. Narindran'i Teeth Maestro ary nampiantranoin'i Vintage Shop tao amin'ny toerana fisotroana kafe tantanan'ny fianakaviany, “Déjà vu”, izany. Nahatalanjona ilay hariva niaraka tamin'ireo bilaogera 20 mahery malaza nivondrona mba hiresaka tsy an-kiato momba ny zavatra rehetra azo eritreretina, tanatin'izany ny kiraro nosafidiako noho ny antony samihafa. Nanoratra bilaogy momba io fihaonana io i Awab  (pejy voafafa) sy i Madeeha  ary ny tenako . Afaka nihaona tamin'i Ali Khurshid mihitsy aza aho, izy izay bilaogera an-tsary mamiratra  avy ao Karachi nasongadina tanatin'ny lahatsoratra ‘Olon'ity Taona ity’ tanatin'ny gazetiboky Time farany teo, izay nanasongadinan-dry zareo bilaogera iraisam-pirenena samihafa malaza.
Ny zavatra hitako tamin'ny fiafaran'ity fihaonana nahafinaritra ity dia na teo aza ny fandraràn'ireo manampahefana ny blogspot iray manontolo, tsy nampisy fahasamihafàna ho an'ireo bilaogera ireo sy ireo hafa an-jatony izany satria mijoro tahaka ny hatrizay ry zareo ary vao mainka aza manolo-tena hampiroborobo ny fanoratana bilaogy ao Pakistana, izay zavatra tena tsara.
Ary farany, tiako ny manamarika fa namerina namelona ny bilaogiko manokana aho, miaraka aminà fendrofendro mafy dia mafy, fa tsy doboka, satria nidiran'ny devoly ny endriky ny wordpress nosafidiako ary tsy maintsy niaina ny endrika helo  sy nanala ireo demony aho mba hamerenana ny rehetra amin'ny laoniny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/01/130906/
 Aza Sakanana ny Bilaogy: http://www.help-pakistan.com/main/dont-block-the-blog
 vahaolana vaovao hialàna amin'ny fandraràna ny blogspot iray manontolo: http://www.teeth.com.pk/blog/2007/01/30/bypass-the-blogspot-ban-via-ssh/
 fanontaniana saro-baliana iray hafa indray: http://politicalpakistan.blogspot.com/2007/01/another-conundrum.html
 ny tenako: http://www.theoliveream.com/2007/01/14/karachi-blog-meet/
 bilaogera an-tsary mamiratra: http://www.flickr.com/photos/alikhurshid/
 endrika helo: http://www.theoliveream.com/2007/01/28/design-hell/